Imibuzo eyi-7 yokubuza i-ejensi yakho ngaphambi kokuba usayine | Martech Zone
Imibuzo eyi-7 yokubuza i-ejensi yakho ngaphambi kokuba usayine
NgeSonto, Novemba 23, 2014 NgeSonto, Novemba 23, 2014 Douglas Karr
Siyathanda ukusebenza nezinye izinhlaka. Ubungcweti bethu ekusebenzeni kahle kwezinjini zokusesha namasu wokuqukethwe kube ngumthombo wabo bonke abalingani bethu be-ejensi futhi siyaqhubeka nokukhulisa leyo ngxenye yebhizinisi lethu. Sisebenza ngentuthuko enkulu, ukuklama nobudlelwano bomphakathi nabantu futhi into esifana ngayo nabo bonke ukulandela imiphumela yebhizinisi.
Ngaphandle kwemiphumela yebhizinisi, i-ejensi yakho ayinandaba. Isayithi elilungiselelwe elingakwazi ukuguqula alinalusizo. Isayithi elihle elingatholakali alinalusizo. Ukucwaninga, ukuklama nokubhala ukhokhela kakhulu lokho ongeke ukwazi ukukwenza kabusha akusizi ngalutho (ngale kokushicilelwa kokuqala).
Sishaqekile ngokuqhubekayo ngenani lamakhasimende eza kithi asebenzise cishe sonke isabelomali sawo kodwa engayiboni imiphumela. Silindele ukuthi sithathe noma yiziphi izimali ezisele sizame ukuthola imiphumela ngazo. Ngezinye izikhathi, asikwazi ukuwenza usebenze.
Kungakho imodeli yethu yebhizinisi ihlukile kakhulu embonini. Sikhokhisa ukubandakanyeka kwemali eyisicaba bese sisebenzela ukuthola imiphumela. Iningi lamakhasimende ethu lisebenzisa izindleko zesisebenzi esisodwa, kodwa iqembu lethu nabo bonke ozakwethu basebenza ukuqinisekisa imiphumela yebhizinisi elinganisekayo iyatholakala.
Ngaphambi kokusayina inkontileka yakho elandelayo ne-ejensi, sizokukhuthaza ukuthi ubuze le mibuzo elandelayo:
Yimaphi amanye amaklayenti asebenze nawo embonini yakho? Ungacabanga ukuthi ngibuza ngezingxabano ezingavela, kepha akusona leso sizathu kuphela. Okwethu agency iyaqhubeka nokuba nempumelelo emangalisayo ngezinkampani ezihlobene nobuchwepheshe bokumaketha kepha siwele phansi ezinye izinkampani zomkhiqizo we-B2C. Ngaleso sizathu, sigxila engxenyeni eyodwa futhi noma ngubani ofuna ukusebenza nathi ngaphandle kwaleyo segimenti unolwazi olwanele ukuqinisekisa ukuthi sikwazi ukuhlangabezana nokulindelwe kwabo.
Ngubani ophethe amafayela womthombo? Lokhu kuvame ukuba yinkinga enkulu kunazo zonke esihlangabezana nayo. I-ejensi izoklama noma yini oyidingayo kepha igcina ubunikazi nokulawulwa kwawo wonke amafayela womthombo. Ngabe ufuna ukuphinda usebenze kabusha umsebenzi? Kufanele ubuze i-ejensi. Ingabe ufuna ukushiya i-ejensi? Ngemuva kwalokho kufanele uqale phansi futhi. Kuyakhathaza kakhulu. Ukubamba ukuthunjwa kwamakhasimende akho akuyona indlela okhulisa ngayo ibhizinisi lakho.
Kwenzekani uma kungasebenzi? Yonke i-ejensi ithuthukisa umsebenzi omkhulu ewenzayo kepha abavamile ukukhuluma ngokuhluleka. Nathi sibe nesabelo sethu. Umbuzo uthi kwenzekani ngokulandelayo. Uma usebenza ekugcineni, kungadingeka ukuthi ukhokhe konke futhi nge-ejensi yamanje noma entsha ukuze uzame ukuthola okudingayo. Sisebenza imali ekhokhwayo ukuze ingcindezi ibe kithi ukuthi silethe. Futhi esimweni esibi kakhulu, amaklayenti ethu nawo ayazi ukuthi sikuphetha kanjani ukuzibandakanya kwethu ngaphambi kokuthi asayine (senza inzuzo ephelele yecebo, ukubika, imibhalo nezimpahla).
Yini efakiwe, yini enye eyengeziwe? Ngishaywa umoya ukuthi zingaki izinkampani ezethula amasayithi noma amasu ukuthola kuphela ukuthi iphrojekthi ayilungiselelwe ukuseshwa noma iselula. Lapho iphonswa inselelo, i-ejensi iyaphendula, "Awukucelanga lokho." Hhe? Uqinisile? Uma i-ejensi yakho ifuna amaklayenti akho, uzophikelela ekwenzeni konke ukukhulisa imiphumela yebhizinisi.
Sibuphatha kanjani ubunikazi? Kulungile uma une-ejensi ethenga izizinda, ukusingathwa, izingqikithi, noma ukuthwebula izithombe ... kepha ngubani ongumnikazi wazo? Akukho lutho olubi ukwedlula ukuthi i-ejensi ingaphenduli futhi ihambe nesizinda sakho (yebo, kusenzeka namanje). Qiniseka ukuthi unesivumelwano se-ironclad endaweni yokuthi noma yimuphi umnikazi ungowakho. Kungakho sihlala sithola ikhadi lesikweletu kumakhasimende ethu futhi sithenge izinsizakalo ngamagama abo. Ukuba nekheli le-imeyili leqembu lapho ungangeza / ususe khona i-ejensi yakho kuyindlela enhle yokuphatha lawo ma-akhawunti lapho ungasoze wawalahleka khona.
Yimaphi amathuluzi abawasebenzisayo? Yize ngasese siwahlebhele ngamanye amapulatifomu amaklayenti ethu, sisavulekile futhi sethembekile kuwo kumathuluzi esiwasebenzisayo. Inzuzo yokuba yi-ejensi ukuthi singathenga amalayisense ebhizinisi kwisoftware esiyisebenzisela amaklayenti amaningana. Sodwa, amaklayenti ethu abengeke akwazi ukubakhokhela kodwa ngokuhlanganyela singabanikeza ukufinyelela. Lokhu akugcini ngokunikeza amaklayenti ethu ukuqonda inani esilihlanzayo, futhi ake sizibonele ngokwalo ikhwalithi nedumela lamathuluzi esiwasebenzisayo.
Bangakusiza kanjani futhi? Kulungile - Benginombono omubi kuze kube manje ake sibe nethemba. Ungamangala kwesinye isikhathi ngamathalente amaningi namaphrojekthi angaphansi kwebhande le-ejensi. Kuyiphutha lethu, kepha kwesinye isikhathi sithola ukuthi iklayenti lethu esivele likhona liqashe enye insiza yomsebenzi ebesingayiqedela yona. Akukho okunye okukhungathekisayo! Qiniseka ukuthi ukhuluma nama-ejensi akho ngomsebenzi omuhle abawenzayo nakwezinye izindawo zokugxila abanobuchwepheshe kuzo. Njengoba usuvele unobudlelwano, ukwengeza kwamanye amasevisi namaphrojekthi ngokuvamile kulula kakhulu kunokuqala okusha ngomthombo omusha.
Sabelane nge-infographic ehlekisayo isikhashana emuva kwesinye isikhathi ubudlelwane bamakhasimende abahlukumezayo lezo zinhlaka ezingena kuzo. Kepha ukuhlukunyezwa kungenzeka ezinhlangothini zombili zobuhlobo futhi kubalulekile ukuthi ungahlukunyezwa yi-ejensi yakho. Hhayi kuphela ukuthi amasu akho angahlupheka, kepha ungalahlekelwa nesabelomali sakho.
Ngicabanga ukuthi konke lokhu kungafingqwa ngombuzo owodwa. Ingabe i-ejensi yakho isebenza ukuqinisekisa imiphumela yakho yebhizinisi noma eyabo? Sikholelwa lapho amaklayenti ethu ehlomula, nathi si… ngakho lokho kuhlala kuyinto yethu ephambili.
Tags: agencyizinkinga zenhlanganoimibuzo ejensiubudlelwane be-ejensi
Hlela kabusha, bhala kabusha futhi uthathe umhlalaphansi
Ividiyo: Qalisa Isitolo Sakho Se-ecommerce ngoHhafu wehora
Nov 27, 2014 ngo-3: 16 AM
Ngakho-ke ngu-2am wokubonga futhi cha angichithanga ubusuku bonke ngithumela ama-imeyili kubobonke engibabongayo nakuba ngikwenza lokho ngomkhuleko. Ngisahlanza i-imeyili njengeqembu lezigelekeqe elakha umuntu ongenzi nzuzo ngewebhusayithi ngethemba lokuthi yethulwe ekuqaleni kwalo nyaka omusha. Ukuphawula kwami ​​lapha kuDoug kuwukubonga komphakathi, okuthunyelwe kwakhe kwamanje kukhombisa ubuqotho, ikhodi yokuziphatha nokuziphatha obala engakhangwa kukho iminyaka eminingana lapho sobabili sisekela ngenkuthalo "iSmall Indiana" ngaphambi kokuvela kweFacebook. Ukuphoqelelwa ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi nokululama ekuhlaselweni yinhliziyo kwangikhokhela esahlukweni sami sokugcina noNkulunkulu, umphefumulo wami womhlalaphansi waseHavanese osethathe umhlalaphansi, iSocial Security nekhompyutha enamakhilomitha amaningi kunepiki yami. Ngingu-nerd oyisaga kodwa kungekudala ngifunde ukuthi i-eBay bekungeke kube umsebenzi omusha kepha okwenzeka empilweni kwanginika ukuthanda i-eCommerce, njengokuphinda ngiqondise iChamber of Commerce nokusebenza nabaninimabhizinisi kepha kukhawulelwe kubanikazi abazimele nabase-Indiana kuphela. Njengoba iphrojekthi yami yaba yintandokazi kanjalo nokuthanda nokuhlonipha kwami Douglas Karr ngokuthumela kwakhe ezinkundleni zokuxhumana kanye namabhulogi akhe. Akazi ukuthi ubungcweti bakhe babungabi namandla kangako kuye njengoDoug lowo muntu. Kuyamangaza ukuthi i-nerd yekhompyutha ephelele ithola ubudlelwano obunjalo neGeeker efezekile neyaziwayo, umuntu ovame ukuzwa ukuthi ubengumngane nomeluleki wempilo yonke ngenkathi ebona ukukhuluma ubuso nobuso kwenzeke kabili kuphela kule minyaka. Yebo, usesenyameni njengoba ngimthola ku-inthanethi namabhulogi akhe kanye nemithombo yezokuxhumana ngakho-ke ukumbona kaningi akudingekile ukuthi azizwe eqiniseka ukuthi uyikho ngempela. Sabelana ngokuthandwa okuningi nangakuthandi kodwa kwesinye isikhathi siye saphikisana ngokusobala; (khumbula ukuthi ngiyavuma ngaphandle kolwazi umnikazi wekhompyutha ngakho-ke akuyona i-barometer efanelekile,) kepha imibono yethu yezenkolo, yokuziphatha, yezenhlalo, yamasiko nezepolitiki ivame kakhulu ukuqondaniswa futhi yakha ukwethembeka kokwamukela imibono nokuholwa kwakhe kobungcweti. KungoKubonga futhi futhi ukubona lokhu kungafihli lutho ngaphakathi kwebhulogi kungiletha ukuthi ngihlanganyele isiqwenga sokubonga kwakho kanye nokwakho.